» क्यानले खेलाडीको खातामा तलब पठायो, कुन खेलाडीले कति पाउँछन् ?
२०७७ असोज ११, आइतबार
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार ११:५९
नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान०ले सिनियर क्रिकेट खेलाडीको एक वर्षको तलब पठाएको छ । आईसीसीबाट प्राप्त एक वर्षको रकम क्यानले बुधबार खेलाडीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको हो । २२ जना खेलाडी र एक टेक्निकल एनालिस्टसहित २३ जनाको तलब क्यानले पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ । तर क्यानले भने अहिलेसम्म २०१९ को ग्रेडिङ लिस्ट र तलब पठाएकोबारे केही सार्वजनिक गरेको छैन ।
क्यानले यसअघि आईसीसीको मागअनुसार २२ खेलाडी र एक जना टेक्निकल एनालिस्टसहित २३ जनाको विवरण आईसीसीमा पठाएको थियो । त्यहीअनुसार सेप्टेम्बर १ मा आईसीसीले रकम निकासा गरेको थियो, अनलाइन खबरले लेखेको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाली खेलाडीले २०१७ र २०१८ को तलब २०१९ को फेब्रुअरीमा एकुमष्ट प्राप्त गरेका थिए । यसपटक तीन ग्रेडमा रहेका सबै खेलाडीहरुले १० हजार बढी तलब पाउनेछन् । क्यानले १० हजार बढाउन गरेको प्रस्ताव आईसीसीले स्वीकार गरेर तलब पठाएको हो ।
कुन ग्रेडका खेलाडीले कति तलब पाउँछन् ?
हरेक ग्रेडका खेलाडीले पाउने तलबमा १० हजार वृद्धि भएपछि अब ‘ए’ ग्रेडमा रहेका खेलाडीले मासिक ४५ हजार रुपैयाँको दरले प्राप्त गरेका छन् । यस्तै ‘बी’ ग्रेडमा रहेकाले ३५ र ‘सी’ ग्रेडमा रहेकाले २५ हजार पाउनेछन् । यसअघि ‘ए’ मा हुनेले ३५ हजार ‘बी’मा हुनेले २५ हजार र ‘सी’ मा हुनेले १५ हजार पाएका थिए ।
अब ‘ए’ ग्रेडका खेलाडीले एक वर्षको एकमुष्ट ५ लाख ४० हजार पाएका छन् । यस्तै ‘बी’ ग्रेडका खेलाडीले ४ लाख २० हजार र ‘सी’ ग्रेडका खेलाडीले ३ लाख पाएका छन् । यस्तै टेक्निकल एनालिष्ट रमन शिवाकोटीले ‘सी’ ग्रेडका खेलाडीको बराबर तलब पाउनेछन् ।
कुन ग्रेडमा कुन खेलाडी ?
पछिल्लो पटक २०१७ र २०१८ को तलब पाउँदा तीन ग्रेडमा २१ जना खेलाडी थिए । २०१९ को लागि अपडेट भएको ग्रेडिङ लिस्टमा २२ जना छन् । जसमा ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडमा समान ८ जना छन् भने ‘सी’ ग्रेडमा ६ जना छन् ।
२०१९ मा नखेलेका खेलाडीहरु ग्रेडिङबाट बाहिरिएका छन् भने २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका खेलाडीहरुले इन्ट्री पाएका छन् ।
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीसहित ८ जना ‘ए’ ग्रेडमा छन् ।
‘ए’ ग्रेड स् ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का, शरद भेषावकर, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी र विनोद भण्डारी ।
‘बी’ ग्रेड स् अभिनाश बोहोरा, आरिफ शेख, बसन्त रेग्मी, ललितनारायण राजवंशी, रोहित पौडेल, पवन सराफ, सन्दिप जोरा र सुशन भारी ।
‘सी’ ग्रेड स् राजु रिजाल, प्रदीप ऐरी, रसिद खान, इशान पाण्डे, कुशल मल्ल र कुशल भुर्तेल ।
बोर्नमाउथद्धारा क्रिष्टल प्यालेस ११–१० गोलले पराजित
हत्या आरोपी २७ वर्षका रेस्लर नाविदलाई मृत्युदण्ड
अष्ट्रेलिया पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा १९ रनले विजयी
अनुशासन तोडेको आरोपमा नोभाक जोकोभिच यूएस ओपन टेनिस खेल्न अयोग्य ठहर
वर्षाको कारण इङ्ल्याण्ड र पाकिस्तानबीचको पहिलो टी-ट्वेन्टी रद्द
मेसी बार्सिलोनामै रहे बार्तामेउ अध्यक्ष पद छाड्न तयार
कोरोना अपडेटः विश्वभर संक्रमितको संख्या तीन करोड नाघ्यो
नेकपाको सचिवालय बैठक आइतबारलाई सारियो
कोरोना अपडेटः नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ संक्रमितको मृत्यु
नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमद्धारा राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ ग्रहण
कोरोना अपडेटः नेपालमा बिहीबार १ हजार २ सय ४६ कोरोना संक्रमित थपिए
हिरासतमा भएको मृत्यु अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन